The akasununguka paIndaneti basa. Clamp akabatanidzwa pamwechete kuvaka
mufanidzo Dzose 1: 0.5 1 2 3 4 5 6
The dhayamita pakati nenyere D
The dhayamita of mhete B
shinda Length H
Dzemaitirwe kuvakwa kiramba hukuru
D - The dhayamita pakati nenyere
B - The dhayamita of mhete
H - Thread urefu
Buy Building Hardware harisi dambudziko. Sales vane fasteners chero zviitiko. Pipe okusungisa, okusungisa yokugadzirisa siyana kukura uye kuenda. Asi dzimwe nguva pangasava muchitoro yechigarire uye uchida kuita panaakabatanidzwa pamwechete kirambu pachako.
Pakora kunosanganisira Threaded mhete vane nzungu uye clamping ndiro. Hairpin anokotama pamusoro nenyere dhayamita uye simbi muhuro zvagadzirirwa. The nemuti ndiro makomba vaviri vari akachera. Kwezvatiri pamusoro mbambo rikazvisundira kuzorwa mutopota, sezvo kiramba. Kazhinji kushandiswa pakuvaka fenzi, izvo vasiyana ndiro pamatanda.